Sir xasaasi ah: Damu-Jadiid, doorashada 2016-ka iyo mad-habta shiicada ee Somalia ka billaabatay. | Gaaloos.com
Home » galmada » Sir xasaasi ah: Damu-Jadiid, doorashada 2016-ka iyo mad-habta shiicada ee Somalia ka billaabatay.
Sir xasaasi ah: Damu-Jadiid, doorashada 2016-ka iyo mad-habta shiicada ee Somalia ka billaabatay.
Ururka Damul-jadiid ee qabtey hoggaanka Soomaaliya sanadkii 2012, ayaa mudadii ay xilka hayeen ku waayey saaxiibo badan oo ku tageeray ol-olihii ay u galeen tartanka Madaxtooyada Soomaaliya, sidoo kale waxaa la dhihi karaa waxay samaysteen saaxiibo cusub muddadii ay dalka ka talinayeen.
Maalmihii u danbeeyey waxaa warbaahinta Soomaalida la soo gaarsiiyey laba Baasaboor oo la sheegay in ay leeyihiin laba nin oo u dhashey dalka Iran kuwaas oo mad-habta Shiicada ku faafinayey Soomaaliya.
Goobaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka ay sheegtey in ay ku faafinayeen ayaa ah magaalada Muqdisho, meelo ka mid ah Gobolada Dhexe iyo Degmada Qardho ee Puntland.
Hay’adda NISA faah-faahin iyo caddeymo ma aysan soo raacin aan ka ahayn qoraal kooban.
NISA oo si toos ah u hoos tagta Madaxtooyada ayaan horey looga baran warbixinada noocaan ah inay soo bandhigaan. Tusaale; kooxda ugu weyn ee Cadowga u ah NISA ee A-shabaab weligeed hay’ada Sirdoonka masoo bandhigin cida maalgelisa iyo wadamada ku lugta leh-toona.
Hay’adda Nabadsugidda ayaa sheegtay in labada nin ee ay qabteen bartil-maameedkoodu ahaa Xuska Mowliidka Nebiga NNKH iyo guur wadareed dhalinta guurdoonka ah.
Dalka Iran oo ah dalka ugu weyn ee mad-habta Shiicada ayaa sanadii 2011 waxa uu ka mid ahaa dalalkii sheegay in ay u soo gurmadeen Somalia markii ay taagneyd macaluushu gaar ahaan gobolada Koonfureed.
Bishii Agoosto 2011 waxaa Muqdisho yimid Wasiirkii Arrimaha Dibadda ee markaas Cali Akbar Saalixi, waxaana dalkiisu ku yaboohay 25 milyan oo dollar oo la marsiiyey hay’adda Bisha Cas ee dalka Iran waxaa xiligaas Madaxweyne ahaa Sheekh Shariif.
Dalka Iran ayaa gargaarkiisi u horeysey ku keenay Diyaarad, bishii Agoosto 2011, waxaa ku xigey Markab weyn oo ku soo xirtey Muqdisho bishii Nofeember 2011. Deeqaha Iran ma ahayn wax qarsoon.
Sanad kadib ayuu mar kale Wasiirkii Arrimaha Dibadda ee Iran soo booqdey Muqdisho laba bilood kadib doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud.
Dalka Iran waxa uu safaaradiisi dib u furtey sanadkii 2012.
Waxaa dad badan is weydiinayaa waxa ka run ah warbixinta Hay’adda NISA ay soo bandhigtey? danta laga leeyahay? iyo waxa xiligan xasaasiga ah loogu soo beegay?
Olola Doorashada 2016 & Maamulka Hiiraan + Sh/dhexe
Ururka Damul-jadiid waxay mar kale loolan ugu jiraan sidii ay dalka taladiisa u sii hanan lahaayeen 2016. Mudaddii afarta sanado ahayd ee ay talada hayeen waxaa hoos u dhacay kalsoonidii caalamku ku qabey, waxaana ay dhumiyeen saaxiibo waaweyn oo ay markii hore lahayeen sida dalalka Qatar iyo Turkiga.
Sidoo kale Ururka Damul-jadiid waxaa ka bakhtiyey Mashruucii Argagixiso la dirirka ee ay dalalka reer Galbeedka wax uga heli jireen, kadib markii dhexdooda la aamini waayey loona arkey in ay ka buuxaan gacmo aan la aamini karin.
Damal-jadiid ayaa tan iyo sanadkii 2014 kalsooni weyn ku abuuray dalka Sucuudiga oo hadda hormuud u ah xulafada ka dhanka ah Xuuthiyiinta Shiicda ah ee Yemen xulafadaas oo Soomaaliya magac ahaan uga mid tahay, sidoo kale waxa uu dhawaan dhisey isbahaysi dalal islaam ah ay ku mideysan yihiin oo ah Argagixiso la dirir!, dalalka Iran, Ciraaq, Siiriya iyo Lubnaan kama mid aha is-bahaysigaas. Iran iyo Sucuudiga ayaa siyaasad ahaan ah kuwo aad u kala fog oo loolan culus ka dhexeeyo, kadib markii Iran ku guuleysatey saameynta siyaasadda dalalka Ciraaq, Lubnaan, Siiriya iyo Yemen oo ay hadda faraha kula jirto, halka ay ahayd mid go’doonsan 10 sano kahor.
Waxaa la aaminsan yahay dhawaaqa ka soo baxay ururka Damul-jadiid ee ah in Iran ay Soomaaliya ka faafineyso mad-habta Shiicada in uu la xiriiro arrimaha Siyaasadda Khaliijka, wuxuuna u muuqdaa mid gaar ahaan Sucuudiga looga doonayo taageero dhaqaale, kaas oo ay xulafada Madaxweynaha doonayaan inay ku maalgeliyaan mashruucooda 2016 iyo waliba sidii ay awooda ugu yeelan lahaayeen maamulka la doonayo in lasoo dhiso ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Damul-jadiid ayaa horey dhaqaale badan uga bixiyey dhismihii Maamulka Galmudug oo ay si aan qarsoodi aheyn dhaqaalaha Qaranka ugu taageereen Cabdikariim Guuleed oo ka tirsan kooxdan.
Damul-jadiid ayaa isu muuujinaya in uu yahay ururka keliya ee ka hortegi kara khatarta Iran in ay soo caga dhigato Geeska Afrika oo hadda la ciir-ciiraya dhibaatooyin ururo diimeed geysteen. Warbixno Soomaaliya laga qorey ayaa lagu sheegay in sanadihii 2006 – 2009 Sucuudigu tageeri jirey Maxkamadihii Islaamiga ahaa oo markaas ururka al-Shabaab ku dhexjirey.
Dad badan ayaa is weydiinaya waxaa Soomaaliya ka hawlgala hay’ado badan oo laga lee yahay dalalka reer Galbeedka, waxaa jira kuwo si toos ah u wata magacyo asal ahaan kasoo jeeda Ururo Kirishtaan ah, ma jirto horeyna uma dhicin in ay hal mar Dowladdu sheegtay in diinta Masiixiyada lagu faafiyo Soomaaliya!
Maxaa keenay in ay maanta xiriiriyaan Suufiyada oo ah dad Sunni ah iyo Shiicada iyaga oo warbixintooda ku soo beegey xili la xusaayo Mowliidkii Nebiga NNKH, islamarkaana lagu sheego warbixintii NISA in ay raggii Iran u dhashay ay fuliyeen xuska Mowliidka!
Waxaa warbixinta lagu sheegay in siyaasiyiin sare ay xiriir la leeyihiin hay’adda Shiiceynta ka wadey Somalia, waxaa la og yahay in Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari uu booqdey dalka Iran , sanadkii 2014, sidoo kale waxaa la ogyahay in Jawaari uu ku dhawaaqey isla todobaadkan in maalinta la xuso dhalashada nebga NNKH ay tahay maalin ciid Qaran ah, “Saca Naasaha Adag iyo Weedha Maxaa Kulmiyey” ayuu yiri ninkii.
Warbixintii NISA ayaa lagu sheegay in goobaha ay Shiicada lacagtu ku bixisay ama dhaq-dhaqaaqa ka waday ay kamid yihiin Gobalada Dhexe oo uu loolan uga dhaxeeyo Damul-jadiid iyo Ahlusunna, Qeybo kamid ah Muqdisho oo ah xarunta NISA iyo magaalada Qardho oo ka tirsan maamulka Puntland, arrinta Qardho ay noqotay mid hadal kasoo noqday durbadiiba.
Ol-olaha Damul-jadiid ay ku raadinayaan dhaqaalaha, waxaa been-abuur ku tilmaamey maamulka iyo waxgaradka degmada Qardho oo ah meelaha ay sheegeen in la garsiiyey, Qardho waa magaalo yar oo aan la isku dhex dhuuman karin lana yaqaano hay’adaha ka hawlgala sida maamulkeedu sheegay, waxaa la is-weydiinayaa ma siyaasi Damul-jadiid reer Qardho ah ayaa ku darsadey mashruuca in magaladiisa loogu daro oo ay ka mid noqoto meelaha dhaqaalaha lagu helaayo? iyada oo la ogyahay in Xukuumada iyo Waliba Hay’adda NISA ay ku jiraan xubno kasoo jeeda magaalada Qardho.
Sidoo kale waxaa warbixinta NISA lagu weeraray dhulka Ahlu-sunnah ka taliso iyada oo lagu tilmaamey meelo kamid ah Gobolada Dhexe. Bartamihii sanadkan ayey sidan oo kale xubno kamid ah Dowlada ay Ahlusunna Wal Jamaaca la xariiriyeen Shiicada iyo Iran, xiligaasi oo ay taagneyd xiisada dhismaha maamulka Galmudug. Maamulka Ahlu-Sunna ee gobalada dhexe ayaa horey u beeniyey wararkaasi.
Ma ahan wax cusub in siyaasiyiinta Damul-jadiid ay la yimaadaan hadba tab cusub, dhibaato aan taagneyn ay calanka u taagaan sida in ay sheegeen in dalka ka mamnuuceen xafladaha Kirismiska iyo sanadka cusub, taas oo ah mushkilado aanba haysan umadda Soomaaliyeed.
Qorshaha Damul-jadiid waa mid qoto dheer oo illaa iyo hada kalbar sidii ay rabeen ugu fuley marka laga eego doorashadii 2012 iyo dhismihii maamulka Galmudug, balse mashruucooda ugu weyn ayaa ah doorashada 2016 sidii ay dib ugu soo noqon lahaayeen hogaanka dalka, mana aha markii ugu horeysay oo ay ololahooda doorashada ay u adeegsadaan dhaqaale ka yimid dalalka Khaliijka, balse su’aasha iswediinta mudan ayaa ah; Maxaa ka dhalan kara duufaanta siyaasadeed oo ay kicinayaan xisbi Diimeedka u oloolamaya xukunka dalka Soomaaliya?
W/Q. Hussein Farah
Title: Sir xasaasi ah: Damu-Jadiid, doorashada 2016-ka iyo mad-habta shiicada ee Somalia ka billaabatay.
Posted by galmada Net, Published at 7:00 AM and have 0 comments